Rag Burcad Ah oo Xukun Gacan Goyn Ah Lagula Fuliyay Degmada Kurtun Waareey Ee Sh/Hoose Dhageyso.
Tuesday January 03, 2017 - 10:07:43 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in maxkamad islaami ah ay xukun gacan goyn ah ku fulisay kooxo burcad ah oo fal catooya ah gaystay.
Fagaara weyn oo ku yaala degmada Kurtunwaarey ee gobalka Shabeelada hoose shalay gelinkii dambe waxaa ka dhacay xukun Xaddu Sariqa ah oo lagu fuliyay laba Nin oo fal xatooyo ah ka geystay deegaan hoos yimaad magaalada Kurtun waareey.
Qaadiga Maxkamadda Islaamiga wilaayada Shabeelaha Hoose ayaa akhriyay xukunka ay mutaysteen ragga burcadda ah oo ciidamada Xisbada ay kasoo qabteen deegaanka tuulo ku dhow Kurtun waareey.
C/qaadir Madeey Roobow 20 sana jir ah iyo Maadeey Eenoow Aadan oo 23 sana jir ah ayaa lagusoo eedeeyay in ay Jabsadeen dukaan kuyaal deegaankatuulada dhega-buroow islamarkaana ay ka qaateen lacag cadadkeedu yahay 5,000 Milyan shilin soomaali ah (Shan Milyan shilin Soomaali ah) iyo 60 Kaarka ku hadalka ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta dalka.
Baaritaano iyo dabagal dheer kadib ayay ciidamada Xisbada gacanta kusoo dhigeen raggan tuugada kadibna maxkamad islaami ah ayaa la horgeeyay ugu dambeyntiina waxaa lagu xukumay wixii ay shareecada Islaamka ka mutaysteen.
Labada Nin ee falka xatooyada ah lagu helay ayaa laga gooyay mid walba gacanta midig, waa markii ugu horraysay oo xukun xadu sariqa ah ka dhaco degmada Kurtun waareey.
Halkan ka dhageyso Xukunka Gacan goynta ah MP3